Antwerp, ebe njedebe na Flanders | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Netherlands, Ihe ị ga-ahụ
Antwerp Ọ bụ isi obodo nke otu aha ahụ, dị na flanders. Ọ bụ obodo mara mma, dị kilomita 40 site na Brussels, ọgaranya, na-arụsi ọrụ ike, azụmahịa na ọdịbendị, yana otu ọdụ ụgbọ mmiri Europe kachasị mkpa. Ndi anyi choputara Ebe nkiri ndị njem na Antwerp?
N'oge ahụ, ọnọdụ ahụ metụtara Covidien-19 bụ otu ihe ahụ dị ka ndị fọdụrụ na Europe, si imeghe nwayọ ma nwayọ nwayọ. Umslọ ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ ahịa, ụlọ akụkọ ihe mere eme, nnukwu ụlọ, ụlọ oriri na ọ cafụ andụ na-emeghe ugbu a. Nwere ike ịme njem gburugburu obodo a na July ebe a na-eme ihe nkiri, ebe a na-eme ihe nkiri, ogige ntụrụndụ, casinos na ebe igwu mmiri emepererị.
2 Njem nleta Antwerp
Obodo bu n'akụkụ osimiri Scheldt, dị ka anyị kwuru nanị kilomita 40 site na Brussels na naanị 15 site na ókèala na Netherlands. Mpaghara Flanders bụ mpaghara ebe a na-asụ Flemish, olumba Dutch. N’akụkọ ihe mere eme niile ọ dịgasị iche n’ibu: ma ọ bụrụ n’etiti ụwa na ọ bụ naanị otu mpaghara, emesia ọ nwere mpaghara ka ukwuu, na-agafe Belgium, Netherlands, Luxembourg, France na Germany.
Taa Flanders nwere oghere atọ, otu akụkụ na Belgium, ọzọ na France na nke ọzọ na Netherlands. Banyere Antwerp, obodo ahụ nwere ya si na a osote gallo-romanKa oge na-aga, na narị afọ nke iri, ọ ghọrọ Alaeze Ukwu Rom dị nsọKa oge na-aga, nchapụta ya toro na narị afọ nke XNUMX ma si otu a, n'etiti ọgba aghara, ọrụ na mgbukpọ, ọ ruru narị afọ nke XNUMX. Mgbe ahụ, ndị Germany bichiri ya ma mesịa ndị Allies tọhapụ ya.
Njem nleta Antwerp
Na Antwerp ị nwere ike ịhọrọ ịhụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ebe nkiri, ụka, ncheta, ụkpụrụ ụlọ ebube, ogige ma ọ bụ saịtị jupụtara na akụkọ ihe mere eme. Ka anyị kwuo maka ụka: obodo ahụ nwere ọtụtụ ụlọ arụsị akụkọ ihe mere eme, n'etiti ụka, ụlọ nzukọ na alakụba.
La Katidral nke Nwanyị Anyị O were afọ 169 iji wuo ma wee na-achịkwa mbara igwe obodo ahụ na 1521 mgbe ụlọ mgbịrịgba ya ruru mita 123 elu. Ọ bụ Othdị Gothic ma nwee ọtụtụ ọrụ nkà, n'etiti Rubens ọrụ na a pụrụ ịhụ taa na nnukwu ụgbọ mmiri mgbe afọ iri abụọ nke mweghachi gasịrị. Ọ na-emepe malite n’elekere iri na abụọ nke ehihie ruo n’elekere atọ nke ehihie.
E nwekwara Chọọchị San Carlos Borromeo, Ebe a na-ahụ stampụ Rubens ọtụtụ. Ọ bụ ụka nyere ndị Jesuit iwu ma wuo ya tinye 1615 y 1621. Isi ebe ịchụàjà ahụ na ụlọ ụka Santa María mara mma, nke nwere ọtụtụ ihe osise osisi na usoro dị egwu na nke mbụ karịa isi ebe ịchụàjà nke gbanwere eserese. Ọ na-emepe site na elekere iri nke ụtụtụ ruo iri na abụọ nke mgbede na site na 10 ruo 12 elekere.
La Chọọchị San Andrés Ọ bụ ụlọ nsọ ọzọ mara mma site na narị afọ nke 70, nke dị na agbata obi nke otu aha. O nwere ebe ịchụàjà baroque na ihe ncheta nke Queen Mary Stuart, Queen of Scots. Chọọchị ahụ dị n'oge Gothic ma weghachite ya na 36s. Ebe ịchụàjà ya dị nnukwu, toro ogologo, maa mma, ma nwee ọla edo nke ndị nsọ iri atọ na isii. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị nwere mmasị karịa na chọọchị, e nwere Monumental Church of Antwerp, Church of Saint Paul na Chọọchị Saint James.
You na pere mpe n’omenala mgbe a bịara n’ihe nlegharị anya? Mgbe ahụ enwere nkuku na Antwerp na ị ga-ahụ ya n'anya. Ọmụmaatụ, Oke ala ma ọ bụ Ọwara Santa Ana. Ọ bụ amaokwu mepere na 1933 na gafere osimiri na nke ndị na-ebugharị osisi na-enweta. Ọzọ ọmarịcha akuku ke Vlaeykensgang uzo malite na 1591.
Alzọ a jikọtara Hoogstraat na Oude Koormarkt Pelgrimstraat na mgbe ị gafere ya ọ dịka ije ije n’oge. N’oge gara aga, ndị na-agba akpụkpọ ụkwụ na ndị ogbenye dara ogbenye bi na alley a. N'oge a e nwere ụlọ ndị mgbe ochie na veranda ndị na-ese ihe na ọbụna ụfọdụ nanị ụlọ oriri na ọ restaurantụ .ụ.
Enwekwara ndi Enweta Markt na mbu, obu square ma obu udiri nzuko nke di na ndi bi na nso. A haziri ahịa na ahịa kwa afọ ebe ndị ahịa Bekee na-azụ ahịa ha na ndị Italitali, ndị Spen ma ọ bụ ndị si ugwu Europe.
N'ikwu okwu banyere azụmahịa, taa ụdị nke oge a bụ mkpasu iwe nke ukwuu ọdụ ụgbọ mmiri nke antwerp. Ọ bụ nnukwu na otu ụzọ isi ghọta usoro ya bụ gaa ụgbọ mmiri ma ọ bụ gbazite igwe kwụ otu ebe ma soro usoro nzọ ụkwụ ịgagharị mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọ bụrụ na ị na-aga ke ndaeyo, a ga-ekwe omume ebe izuike na-anọ a awa ole na ole nwere ike ịbụ Osimiri Saint Anneke, n'aka ekpe nke osimiri ahụ. Nwere ike ịga ebe ahụ site n'ụgbọ mmiri, n'ụkwụ ma ọ bụ site na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ site na bọs ma ọ bụ tram, ma nwee ọ theụ panoramic echiche, eri mpaghara mọsel, ama ama, sunbathing ma ọ bụ ịgba mmiri n'ọdọ mmiri n'èzí ebe a.
N'akụkụ akụkụ ndị a pụrụ iche na Antwerp, obodo ahụ na-enye anyị ngosi nka ka ị ghara ịchọ ileghara anya. Nke a Rublọ Rubens, Royal Museum nke Fine Arts na Antwerp, oflọ Akwụkwọ, ndị Reede Museum, Eugeen Van Mieghem Museum, ndị FOMU Museum nke Foto ma ọ bụ Plantin-Moretus Museum.
I nwekwara ike ileta Butlọ Nzukọ Butlọ Ihe Nkume Museumlọ Ihe Ochie nke Obodo na narị afọ isii nke akụkọ ihe mere eme, ma ọ bụ Ulo umu agbogho nke mbụ rụrụ ọrụ dị ka ụmụ mgbei maka ụmụ agbọghọ, na narị afọ nke XNUMX. Iji lee panorama zuru oke nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nke Antwerp ihe kachasị mma budata na ngwa Antwerp Museum, budata na onlọ Ahịa Play ma ọ bụ AppStore.
Nhọrọ ọzọ nke obodo na-enye gị bụ ịzụta ya Kaadị Antwerp City. Enwere nsụgharị atọ, 24, 48 na 72 awa na mgbakwunye na imeghe ọnụ ụzọ nke ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe nkiri (ụlọ ngosi ihe mgbe ochie 15, ụlọ ụka akụkọ ihe mere eme 4 na ebe nkiri 2), ego dị n'etiti 10 na 25%, na-enye gị ohere ịgagharị n'efu site na usoro njem obodo.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ: WIFI intaneti! Antwerp na-enye ndị ọbịa ya ntanetị n’efu. Enwere ọtụtụ mpaghara WiFi efu: Via Sinjoor, okporo ụzọ dị n'etiti Central Station na Scheldt, Grote Markt, Meirbrug, Schoenmarkt, wdg. Naanị ị ga-edebanye aha.
N'ikpeazụ, mee atụmatụ nleta gị Ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị ole na ole: họrọ n'etiti akụkọ ihe mere eme akụkọ ihe mere eme, ebe etiti ọdụ, Districtlọ ihe nkiri, District San Andrés, District University, Red Light District ... Ihe ntakịrị ihe niile ga-enye gị panorama a na-agaghị echefu echefu nke obodo a na ọtụtụ mgbe ụfọdụ ọ na-anọgide na ndepụta ịchọrọ n'ihi na ndị ọzọ na-emeri, dịka ndị amoosu, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ Amsterdam.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Nkechi » Netherlands » Antwerp, ebe njedebe na Flanders